ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လျှပ်စစ်မီတာခ လျှော့ကျရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၃ ရက်မြောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်၊ မန္တလေးမြို့တွင်လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြ (ရုပ်သံ)
လျှပ်စစ်မီတာခ လျှော့ကျရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၃ ရက်မြောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်၊ မန္တလေးမြို့တွင်လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြ (ရုပ်သံ)
မြတ်စွန်းတဲ. လုပ်ငန်း (ဥပမာ - သစ်တောနဲ.သယံဇာတ
တွေ လက်ညှိးထိုး ရောင်းစားတာ) မျိုးကျတော.အသံ
မကြားရဘူး ။ အိတ်ကပ်ထဲ ထည်.ကျတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာ
အိမ်ဝယ် ၊ မြေ၀ယ် ၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင်. နဲ. ။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင်. အဖက်ဖက်က နိမ်.ကျနေတဲ.ပြည်သူတွေ
ကျတော. အရင်း မကိုက်လို.ဆိုပြီး
မီတာခ တိုးကောက်တယ် ။
ရွံဖို.ကောင်းတဲ. အစိုးရ ပါလား ။ ။ ။